फेरी पीडित राउटे युवतीलाई सदरमुकाममा लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै, अब के होला ? (भिडियो हेर्नुस्) – Sapana Sanjal
Sapana Sanjal : काठमाडौ । राउटे समुदायका दुई युवती माथि भएको घटना पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले बाह्य व्यक्तिहरुलाई राउटे समुदायमा जान रोक लगाएको छ । तर पनि प्रहरीको आँखा छलेर राउटे बस्तीमा केही वाहिरका मानिस जाने क्रम भने देखिएको छ । एउटा युट्युव च्यानलका संचारकर्मी राउटे वस्तीमा पुगेर घटनाको बारेमा पनि कुरा गरेको देखिन्छ ।
Prevके तपाईले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनु भयो? त्यसो भए के यो सम्भब छ ? खोपले शरीरमा चुम्बकीय शक्ति विकास गर्ने दाबी
Nextअबको ६ महिनाभित्र नेपालमा को-रोना संक्रमणको झन ठूलो जोखिम हुन सक्ने, विज्ञहरुले दिए यस्तो ड-रलाग्दो सङ्केत